काठमाडौमा यो के भयो ? श्री’मानले श्रीम’ती टु’क्रा पारेर यसरि लु’काए बोरा खोलेर हेर्दा हो’स् उ’ड्यो (भिडियो हेर्नुहोस) – Onlines Time
काठमाडौमा यो के भयो ? श्री’मानले श्रीम’ती टु’क्रा पारेर यसरि लु’काए बोरा खोलेर हेर्दा हो’स् उ’ड्यो (भिडियो हेर्नुहोस)
March 17, 2021 March 17, 2021 onlinestimeLeaveaComment on काठमाडौमा यो के भयो ? श्री’मानले श्रीम’ती टु’क्रा पारेर यसरि लु’काए बोरा खोलेर हेर्दा हो’स् उ’ड्यो (भिडियो हेर्नुहोस)
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी पत्नी जाङ्मु इन शेर्पाले आफ्नो माइतघर जादा चारवटा हेलिकोप्टर लिएर सरकारी पैसा दु’रुपयोग गरेको भन्दै विभिन्न मान्छेहरुले ग’लत प्रचार गरेको बताएकी छिन्। केही समय अघि हेलिकोप्टर लिएर माइती गाउँ गएको तस्बिर जाङ्मुले नै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उक्त पोस्ट सार्वजनिक भएपछि विभिन्न मान्छेहरुले त्यसमा प्र’तिक्रिया जनाएका थिए। केहीले सरकारी पैसाको दु’रुपयोग गर्दै हेलिकोप्टरमा ससु’राली गएको आ’रोप समेत लगाएका थिए। त्यसको ज’वाफमा बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जाङ्मुले स्प’ष्टिकरण दिएकी हुन्।
भर्खरै बालुवाटारमा ख’ल्लीब’ल्ली, ओलीमाथि लाग्यो अहिलेसम्मकै यस्तो ग’म्भी’र आ’रोप ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
निर्माण सकिनासाथ पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको पहल थाल्न आग्रह (भिडियो हेर्नुहोस)
March 8, 2021 puspa
जंगलमा नदे’खिने चिजले झापड हन्छ घर पुग्ने बितिकै मान्छे चैट हुन्छ। देउ’ता मिसाउदा यस्तो भो
November 22, 2020 November 22, 2020 onlinestime
भगवान जस्तो श्रिमान बिनोद र अनिताले यसरी मनाए भ्यालेन्टाइन डे,छोरिले रुवाइन (हेर्नुस् भिडियो)
February 14, 2021 February 14, 2021 onlinestime